Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Onye isi ala Sleepout London: Na-agbanwe ndụ na oyi ilu
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Henrik Muehle, onye isi njikwa nke Fleming Hotel na London Mayfair, na CEO Sleepout
Ndị isi azụmaahịa kacha nwee ọmịiko na Lọndọn hapụrụ akwa ha otu abalị na Nọvemba 22 ka ha hie ụra na Lord's Cricket Ground, na-ewekọta ego maka ndị na-eche enweghị ebe obibi n'oge oyi a.
" Abali a bụ abalị m," ka Henrik Muehle, onye isi njikwa nke Fleming Hotel na London Mayfair kwuru. “Ekwajuruwo m akpa ihi ụra, m ga-eyirikwa ọtụtụ uwe na-ekpo ọkụ ka m na-ehi ụra n’abalị oké oyi na-atụ na Lord’s Cricket Grounds na St. Johns Wood Road, London, iji gosi ịdị n’otu n’ebe ndị nọ ná mkpa nọ.”
Bianca Robinson nke Lords Cricket Ground kwuru, sị: “Mkpọchi abụrụla anyị niile ike. Ma were ya na ị nweghị ụlọ, enweghị ihe ndina, enweghị nri, ọ nweghịkwa ebe ọ dị gị mma.
“Ọgba aghara a achụpụla ọtụtụ mmadụ n'okporo ụzọ ebe a chụrụ ha n'ọrụ, enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ha, ma gbalịsie ike inye ezinụlọ ha nri. Ụfọdụ enweela ike iji ọnụ ụlọ nkwari akụ efu, mana na-enweghị nkwado, ha ga-alaghachi n'okporo ámá. Ha chọrọ enyemaka gị. Ị ga-edina na ndị nwe azụmahịa, execs na ndị ọkachamara dị elu, na ndị isi ụdị dị iche iche, ndị niile na-enwe obi ike na-ehi ụra n'èzí iji kwalite mmata na ego, onye ọ bụla na-ekwe nkwa ịkwalite ma ọ bụ nye onyinye opekempe nke £ 2,000 iji lụso enweghị ebe obibi na ịda ogbenye ọgụ. na London. N'abalị gị iso ndị ọgbọ gị na-ehi ụra na nke Onyenwe anyị nwere ike ịgbanwe ndụ gị."
Onye isi ala na-ehi ụra na gburugburu 100 sonyere e mere mgbe e yigharịrị na 2020. N'afọ 2019, ndị na-ehi ụra nwere obi ike oyi wee bulie £ 85,000 dị egwu maka ọrụ ebere obodo.
Henrik Muehle na Hillary Clinton
Henrik Muehle bụ otu n'ime nnukwu ndị na-anakọta ego maka isi ego Sleep CEO. N'ime izu gbara ọchịchịrị n'afọ gara aga mgbe ọrịa ọjọọ ahụ metụtara London, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa kọfị na ụlọ mmanya na-emechi ogologo oge, ọ na-esi nri curries (nri 300) na kichin ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụmụ mgbei maka ndị na-enweghị ebe obibi. Dị ka ọ na-adịkarị, o nwere onye isi nri Michelin Star na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ORMER Mayfair ya, mana n'oge mkpọchi ahụ, enweghị ndị ọrụ, enweghị isi nri, na enweghị ndị ọbịa na họtel ahụ. Ọ ga-eji nanị mmadụ ole na ole kwaba n'ụlọ nkwari akụ ahụ iji mee ka ihe ọ bụla na-aga ma chekwaa.
Ọ bụ oge jọgburu onwe ya nke hapụrụ ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na London niile n'enweghị ọrụ na ego. Ọ bụghị nanị na a chụrụ ọtụtụ n’ime ha n’ọrụ kamakwa ụlọ ha n’ihi na ha enweghịzi ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ha ma na-ehi ụra nke ọma. Ụmụ amaala EU enweghị ike ịlaghachi obodo ha n'ihi na ụgbọ elu ọ bụla ma ọ bụ ụgbọ oloko na-alaghachi na kọntinent ahụ.
Mgbe Henrik Muehle na-aga ogologo njem n'okporo ámá ndị gbahapụrụ agbahapụ nke London, ọ chọtara ụlọ akụ nri n'abalị wee kpebie ozugbo inye aka. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya mbụ nwere obi ụtọ ịkwado ya. Nnukwu ịdị n'otu site n'inye nri na ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ n'ụlọ akụ nri na Trafalgar Square dị nso dị nnọọ ịtụnanya. Henrik haziri akpa nri sitere na M&S maka ndị nọ na mkpa.
O kwesịrị inweta nrite, Frances Smith, London kwuru. Ekwenyere m nke ọma ma ka anyị nwee olile anya na ọ nweghị onye na-enweta oyi ka ọ hie ụra n'ikuku oyi na Lord's Cricket Grounds.
The nro nke enweghị ebe obibi Ndị mmadụ 250,000 na-eche ihu kwa ụbọchị na UK. Nnyocha ndị e mere na nso nso a na-egosi eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ́ gburugburu enweghị ebe obibi na England.
Tọrọ ntọala na 2015 site n'aka Onye isi oche Andy Preston, CEO Sleepout mmemme emeela n'ofe UK, gụnyere ihe omume 8 Sleepout ga-abịa n'afọ a. Emere Sleepout na Lord's Cricket Ground dị na ugwu ọdịda anyanwụ London, ndị isi ọchụnta ego na-arahụkwa n'otu abalị oyi kacha mma n'afọ a iji nweta ego na mmata maka nsogbu ịda ogbenye na-arị elu na UK.
"Ikuku dị n'abalị ahụ magburu onwe ya, na n'agbanyeghị oyi, ịmara na anyị na-enyere ndị mmadụ aka n'ofe mpaghara ahụ mere ka obi dị ọkụ," ka otu onye so na ya kwuru.
Kedu ihe anyị maara gbasara ụra siri ike na London?
Edere mmadụ 11,018 ka ha hiri ụra nke ọma na isi obodo na 2020/21. Data a, sitere na Greater London Authority's, na-enyocha ndị na-ehi ụra siri ike na London nke ndị ọrụ mgbasa ozi hụrụ. Nke a bụ mmụba 3% ma e jiri ya tụnyere ngụkọta nke mmadụ 10,726 hụrụ n'afọ gara aga na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa nke afọ 10 gara aga. N'ime mkpokọta 11,018 n'ozuzu, 7,531 bụ ndị na-ehi ụra siri ike bụ ndị a na-ahụtụbeghị ka ha tọrọ n'ala na London tupu afọ a.
Ọnụ ọgụgụ ihi ụra siri ike na-anọchi anya ọnụ ọnụ ice. Agụnyeghị ndị nọ n'ụlọ nchekwa na ụlọ mbikọ. Ma ọ bụ ndị na-ehi ụra na abalị ụgbọ ala, anọ nke n'anya, ma ọ bụ ejegharị site na otu n'ihe ndina nke ọzọ, na-akọ Glassdoor.